galmudugnews.com » Xildhibaano sharci daro ku tilmaamay shirkadaha qaar ee ka howlgala Muqdisho. Home About
Home » WARARKA » Xildhibaano sharci daro ku tilmaamay shirkadaha qaar ee ka howlgala Muqdisho. Xildhibaano sharci daro ku tilmaamay shirkadaha qaar ee ka howlgala Muqdisho. galmudug on
No Comment Views 16165Xildhibaan Cabdalla boos axmed oo kamid ah mudanaaysha baarlmaanka soomaaliya oo ka hor hadlayay xildhibaano badan ayaa waxaa uu si kulul u sheegay in ay dalka ka hoowlgalaan shirkado ajnabi ah oo si sharci daro ah ku jooga dalka isagoo tilmaamay in ay kamid tahay shirkada duulimaadka SKY iyo 8-shirkadood oo kale loona baahanyahay in dhamaantood la soo marsiiyo baarlamaanka federaalka jamhuuriyada soomaaliya.
Sidoo kale xildhibaan xagaaf oo isna kamid ah baarlamaanka ayaa waxaa uu sheegay in ay jiraan wakaalado iyo hay’ado badan oo gudaha dalka ka dhisan kuwaas oom qaarkood ay san sharciyeeysneeyn halka qaarna aysanba noqonkarin wakaalado shaqeeya.
Gudaha magaalada muqdisho ayaa waxaa ka hoowlgala dhoowr shirkadood oo ajnabi ah kuwaas oo dadka qaar ay ku tilmaamaan in dalka ay ku joogaan si sharci daro ah
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21143 hitsContact US - 19983 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 19608 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 16376 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 16188 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 14882 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 14340 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 14306 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 14006 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 13785 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 12876 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 12665 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 12627 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 12339 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 12067 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11962 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11683 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 11606 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11591 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11579 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11463 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 11323 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11255 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11247 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 11043 hits Home About